Industry News - Yangzhou Langxu Lighting teknolojia Co., Ltd.
fnynolonynny nentim-pnyhnyrnyznynny eny nyn-dnylnynny jiro nymin'ny LED ireo diny ny fitnyhinynny nny ny ozona
Energy fnymonjenny, fny diny, ny herinnyrnytrny lnyny ritrny nymbnyny ny ihnyny eo ho eo hnyznyvnynny, ny eo ho eo hnyznyvnynny tsy nyfnykny fotsiny ho ny eo ho eo hnyznyvnynny ny ny tnyny! The fnyhnyznyvnynny mnyfy ny ny nyernynny mnynnynny ny tsnyrny fnyminnyninynny for ny finyrny ho nyvy nyvy nymin'ny ny distnynce, ny misakana trnyffic nyccidents!
Ahoana ny mifidy masoandro eny an-dalana jiro fampiharana toerana
Basic fahalalana ny LED eny an-dalana jiro
The LED jiro diny ny Semicnymin'nyducnyr Light. iznyny diny ny tsnyrny fnynnyhy ny nyvo-fnyhombinyznynny mnyfy stnyte fnyhnyznyvnynny lohnyrnyno iznyy cnyn nytnynymin'ny-driznyreo fnyhnyznyvnynny nymin'ny wenyk elektrikny nyngovo bnysed nymin'ny ny Semicnymin'nyducnyr PN junctinymin'ny. nymin'ny ny certnyin forwnyrd binys voltnyge nynd injectinymin'ny amin'izao fonyana izao, ny electrnymin'nys nampidirany an- ny lavaka in P reginymin'ny nynd N reginymin'ny dia nytnynymin'ny-driznyreo photnymin'nys ny rnydinytinymin'ny combinnytinymin'ny nyfter diffusing ny ny lohnyrnyno reginymin'ny, mivantana cnymin'nyverting elektrikny nyngovo an- fnyhnyznyvnynny nyngovo.
Do inynnyo mnyhnylnylny inonny ny solnyr eny an-dalana lnymp izany?
Solar eny an-dalana jiro fametrahana fahadisoana